Banyere Anyị - Ningbo Mianxuan m & E Co., Ltd
Anyị factory nke nwetara ICTI International Toy Association asambodo, ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo, EU BSCI ịrụ ụka-elekọta mmadụ ọrụ asambodo na FSC asambodo. Anyị ngwaahịa àmà gụnyere izi ji egwuri egwu, nwa bebi ụlọ, ụgbọ okporo ígwè tent, osisi mgbagwoju anya, ngwá egwú, osisi nkanka wdg Iji mbu nwa okorobịa ọ bụla & girl a-atọ ụtọ, obi ụtọ, nnukwu nwata bụ ihe kasị mma anyị chọrọ.
All nke anyị na-arụpụtara ndị e ji mara mma na ntị zuru ezu izute anyị ahịa chọrọ. Anyị na-emeghe-eme ka OEM ngwaahịa dị ka ndị ahịa 'imewe. Na ọgaranya ahụmahụ na ọkachamara ihe ọmụma na ụmụaka & crafts, anyị ga-enye gị ezi aro, nke-eme ka gị ngwaahịa nchebe ruo niile dị mkpa ule na-enwe ezi ahịa na ahịa.